၁၁ ည / ၁၂ ရက် အမေရိကား ခရီးစဉ်
New York – Washington DC – Philadelphia – Niagara – Buffalo - Las Vegas – Arizona - Los Angeles – San Francisco
၁၁ ~၂၂ ဧပြီရယ်လ ၂၀၁၉ နှစ်သစ်ကူး အတာင်္ကြန်ခရီးစဉ်
Price - 3990 USD
Flight Schedule (China Airlines)
11 April 2019 CI.7916 YANGON	- TAIWAN 10:45 16:20
11 April 2019 CI.012 TAIWAN - NEW YORK 17:30 20:35
21 April 2019 CI.003 SAN FRANCISO	- TAIWAN 01:40 06:00 (22 Apr 2019 Morning)
22 April 2019 CI.7915 TAIWAN	- YANGON 07:00 09:45
Day 1: 11 April 2019 YANGON – TAIPEI – NEW YORK
ဧည့်သည်တော်များသည် နံနက် ၀၈း၃၀ နာရီအချိန် တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် Columbus Travels & Tours မှ Tour Leader ဖြစ်သူ နှင့် တွေ့ဆုံကာ China Airlines ကောင်တာ သို့ Check in ၀င်ပါမည်။ နံနက် ၁၀:၅၀ နာရီ အချိန် တွင် China Airlines လေယာဉ်အမှတ် CI.7916 ဖြင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ သို့ စတင်ထွက်ခွာကြပါမည်။ နေ့လည်စာ ကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညနေ ၀၄:၂၀ နာရီအချိန် တွင် ထိုင်ဝမ် လေဆိပ် Taoyuan သို့ ရောက်ရှိပြီး Transit ဖြတ်သန်းပြီးနောက် ညနေ ၀၅:၃၀ နာရီအချိန်တွင် China Airlines လေယာဉ်အမှတ် CI.012 ဖြင့် New York မြို့ သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ ကြပါမည်။ ညစာ ကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညနေ ၀၇:၁၅ နာရီအချိန်တွင် New York မြို့ ၏ John F Kcnncdy လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်သို့ Local Guide မှ လာရောက် ကြိုဆိုပြီးနောက် ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ Double Tree Hilton Fort Lee Hotel (or) Similar4Star Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 2: 12 April 2019 NEW YORK
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကမ္ဘာကျော် Statue of Liberty ရုပ်ထုရှိရာ ကျွန်း သို့ Manhattan Habour Cruise စီးပြီး သွားရောက် လည်ပတ်ကြပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကြပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာမည်ကျော် Wall Street ရှိ New York Stock Exchange Charging Bull ရုပ်ထု နှင့် September 2011 တွင် ဖြိုချ ဖျတ်စီးခဲ့သော World Trade Centre ၏ Ground Zero , UN Headquarter , Rockfeller Center နှင့် Time Square တို့ သို့ သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် နံမည်ကျော် Empire State Building ၏ အပေါ်ဆုံးထပ် သို့ တက်ရောက်ပြီး New York မြို့ ၏ အလှကို ကြည့်ရှူ့ ခံစားကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာ ကို Seafood Buffet ဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် သို့ ပြန်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 3: 13 April 2019 NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINTON DC
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံ ၏ သမိုင်းဝင်မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် Philadclphia မြို့ သို့ ကားဖြင့် ထွက်ခွာကြပါမည်။ Philadclphia မြို့ သို့ ရောက်လျှင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Benjaminn Franklin ၏ Burial Place , Liberty Bell နှင့် Independence Hall သို့ သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာကို Rangoon Restaurant သို့ သွားရောက်ပြီး မြန်မာ အစားအစာ ဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Washington DC မြို့တော် သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာကြပါမည်။ Washington DC သို့ ရောက်လျှင် သမ္မတ အိမ်ဖြုတော် White House , Capital Building , Lincoln Memorial နှင့် Washington Memorial သွားရောက် လည်ပတ်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ Sheraton DC North Hotel (or) Similar4Star Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 4: 14 April 2019 WASHINGTON – CORNING – NIAGARA FALLS
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် Niagara Falls ရေတံခွန် ရှိသည့် Buffalo မြို့သို့ ကားဖြင့် ထွက်ခွာကြပါမည်။ လမ်းခရီးတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိသည့် နာမည်ကျော် ဖန်ထည်ပြတိုက် Corning Glass Centre သို့ ဖန်ထည် ပစ္စည်းပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို သွားရောက် လေ့လာ ၀ယ်ယူ ကြပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Buffalo မြို့ သို့ ၃ နာရီအချိန်ကြာမြင့်စွာ ကားဖြင့် ခရီးဆက်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို Chinese Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ Days Inn at Niagara Falls Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 4(23 Oct) SYDNEY-BLUE MOUNTAINDay 5: 15 April 2019 NIAGARA FALLS LAS VEGAS
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ နယ်စပ်ရှိ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ အကြီးဆုံး ရေတံခွန် ဖြစ်သည့် Niagara Falls သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ရာသီဥတု အခြေအနေ အပေါ်မူတည်ပြီး Niagara မြစ် အတွင်း Maid of the Mist သင်္ဘောစီးပြီး ရေတံခွန်များကို အနီးကပ် ကြည့်ရှု့ခံစားကြပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Niagara လေဆိပ်ရှိ South West Airlines ကောင်းတာ သို့ Check in ၀င်ကြပါ မည်။ ထို့နောက် နေ့လည်း ၀၂:၀၀ နာရီအချိန် တွင် လေယာဉ်အမှတ် WN.833 ဖြင့် Niagara လေဆိပ် မှ ထွက်ခွာပြီး ညနေ ၄ နာရီအချိန် တွင် ကမ္ဘာကျော် Casino မြို့တော် Las Vegas သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။
ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာမည်ကျော် Fairmount Experience လမ်း နှင့် Fountain of Ballegio ရေပန်းတို့သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါ မည်။ ထို့နောက် ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ Mirage Resort Casino Hotel (or) Similar4Star Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 6: 16 April 2019 LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAS VEGAS
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် Arizona ပြည်နယ်တွင်ရှိသည့် သဘာဝ အံ့ဖွယ်တစ်ခု ဖြစ်သော Grand Canyon ချောက်ကမ်းပါး သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် နာမည်ကျော် Grand Canyon ၏ 720 ဒီဂရီ သဘာဝ အလှတရားကို အထက်ပေ ၄၀၀၀ ကျော်ရှိ ချောက်ကမ်းပါး အပေါ်ယံထိပ်တွင် မှန်ကမ်းပြင်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော Colorado မြစ် ရှိ Skywalk Bridge သို့ တက်ရောက် လည်ပတ်ပြီး ခံစားကြပါမည်။ ထို့နောက် Colorado River Boat စီးခြင်း ၊ Grand Canyon အတွင်း Helicopter စီးခြင်းတို့ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Colorado မြစ် ကိုပိတ်ပြီး ကွန်ကရစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် နာမည်ကျော် Hoover Dam ဆည် သို့ သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို Korea BBQ Buffet ဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် သို့ ပြန်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 7: 17 April 2019 LAS VEGAS – LENWOOD OUTLET – LOS ANGELES
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက်ဖက်ခြမ်း၏ နာမည်ကျော် Los Angeles မြို့ သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ ထို့နောက် လမ်းခရီးတွင် Barstow District ရှိ Lenwood Factory Outlet တွင် နာမည်ကျော် Branded Fashion များဖြစ်သည့် Coach , Tommy Hilfiger , Michael Kors , Lacostco , Guess , Calvin Klein , Nike စသည် တို့ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဈေးဝယ်နိုင်ရန် ဈေးဝယ် ထွက်ချိန်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Los Angeles သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာကြပါမည်။ Los Angeles သို့ ရောက်လျှင် Yoma Restaurant သို့ သွားရောက်ပြီး မြန်မာ အစားအစာဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ Double Tree Hilton Wittier Hotel (or) Similar4Star Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 8: 18 April 2019 LOS ANGELES (UNIVERSAL STUDIOS)
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင် တို့၏ အမည်ကြယ်ပွင့်များရှိရာ နာမည်ကျော် Hollywood Boulevard ရှိ Hollywood Walk of Fame သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ Boulevard လမ်းတလျှောက်တွင်ရှိသည့် Dolby Theatre နှင့် TCL Chinese Theatre တို့ကို ဖြတ်သန်းကြည့်ရှု့ လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ကမ္ဘာကျော် Universal Studios ကစားကွင်း သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို ကစားကွင်းအတွင်း မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Hollywood ရုပ်ရှင်များ ရိုက်ကူးခြင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်မည့် Behind-the-Scence Tour နှင့် King Kong ရုပ်ရှင်ကားထဲ ၀င်ရောက်သွား သလို သည်းထိတ်ရင်ဖို ခံစားရမည့် King Kong 5D စသည့် ရှိူးပွဲများ ၊ ကစားနည်းများကို ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ် ကစားကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာ King Crab Seafood ဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် သို့ ပြန်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူုကြပါမည်။
Day 9: 19 April 2019 LOS ANGELES – SOLVANG – SAN FRANCISCO
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက်ဖက် ကမ်းခြေ ၏ အထင်ဂရမြို့ကြီး တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် San Francisco မြို့သို့ ကားဖြင့် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ထို့နောက် Pacific Coast Highway တလျှောက်ရှိ သာယာလှပသည့် သဘာဝရှူ့ခင်း များကိုဖြတ်သန်းကြည့်ရှူ့ပြီး လမ်းတွင် Demark Style အိမ်ငယ်လေးများဖြင့် နာမည်ကျော်သည့် Solvang မြို့ သို့ ရောက်ရှိပြီး နေ့လည်စာကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် San Francisco မြို့ သို့ ကားမောင်းကြာချိန် ၄ နာရီခွဲခန့် ဆက်လက် ထွက်ခွာကြပါမည်။ San Francisco မြို့ သို့ ရောက်လျှင် ညစာကို Mongolian Hotpot ဖြင့် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ Crowne Plaza Silicon Hotel (or) Similar4Star Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်ပြီး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 10: 20 April 2019 SAN FRANCISCO TAIWAN
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး San Franciso Bay နှင့် Pacific Ocean အကြားရှိ ရေလတ်ကြားအား ဖြတ်သန်း တည်ဆောက်ထားသည့် ကမ္ဘာကျော် Golden Gate Bridge တံတားကြီးသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှူ့ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် ပင်လယ်စာ အစားအသောက်ဆိုင်များ ၊ အိမ်ပြန်လက်ဆောင်များဖြင့် စည်ကားနေသည့် Fisherman Wharf သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ပြီး နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညနေပိုင်းတွင် နာမည်ကျော် Palace of Fine Art , Russian Hill ရှိ Lombard Street နှင့် China Town သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ညနေစာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် SanFrancisco Airport သို့ Check in ၀င်ရန် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ညသန်းခေါင် ၀၁:၄၀ နာရီအချိန် တွင် China Airlines လေယာဉ်အမှတ် CI.003 ဖြင့် ထိုင်ဝမ်လေဆိပ် သို့ ထွက်ခွာကာ လေယာဉ်ပေါ်တွင် တစ်ညတာ အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day 11: 21 April 2019 ON FLIGHT TO TAIWAN
နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ နှင့် ညစာ ကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ On Flight Entertainment များကို ကြည့်ရှု့ လေ့လာနိုင်ပြီး တစ်ညတာကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် ဆက်လက် အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 12: 22 April 2019 TAIWAN YANGON
1. လူကြီးတစ်ဦးဈေးနူန်း USD 3990 (နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနေလျှင်)
2. ကလေးတစ်ဦးလျှင် USD 3290 ( ကုတင်အပိုနှင့်နေလျှင်)
3. တစ်ယောက်ခန်းနေလျှင် USD 4615 (Single နေလျှင် ပိုပေးရသောဈေးနူန်း)
- ဟိုတယ် တစ်ခန်းတွင် လူကြီး ၂ ယောက် ၊ ကလေး ၁ ယောက် အများဆုံး နေထိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
- ဖော်ပြပါ ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းတွင် အမေရိကန် ဗီဇာကြေး USD 160 Per Pax မပါဝင်ပါ ။
- Interview ဖြေဆိုရသောနေ့တွင် အမေရိကန် သံရုံး၏ Visa Section သို့ ဧည့်သည် ကိုယ်တိုင် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်
၂)ခရီးစဉ်သွားဖြစ်ရန်သေချာပါက ဖေါ်ပြပါခရီးစဉ်ဈေးနှုန်း၏ 50% ကို ကြိုတင်ငွေ Deposit အဖြစ်ပေးသွင်းရပါမည်။ ကျန်ငွေ 50% ကို ခရီးမထွက်ခင် ၁၀ရက်/၇ ရက် အလိုတွင် ပေးချေရပါမည်။
၃)Final Payment ပေးခြေပြီးနောက် ခရီးမသွားခင် ၁ ~ ၃ ရက် အလိုတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မလိုက်ဖြစ်ပါက Cancellation Charges အဖြစ် 100% ကောက်ခံပါမည်။
၁)4Star Hotel အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်များတွင် ၁၁ ညအိပ်တည်းခိုနိုင်မူ
၂) China Airlines Flight အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်
၈) ဒသခံ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန် (Local Guide)
၁၀) ခရီးစဉ် အစအဆုံး လိုက်ပါဝန်ဆောင်မှူ့ပေးသော Columbus Travels မှ Tour Leader
၁၁) ခရီးသွား အာမခံ ၀န်ဆောင်မှူ့
၁၂)Blue Ribbon Bag (BRB) Luggage Tracking Service
၃) မှတ်ပုံတင်မူရင်း နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်း မိမိ၏ ပတ်စ်ပို့စာအုပ်၊ မှတ်ပုံတင် နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ပါရှိသော နာမည်နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်များ လုံးဝတူညီရပါမည်။ သန်းခေါင်စာရင်းထဲတွင် မှတ်ပုံတင်နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်တို့ ပါရှိရပါမည်။ အသက် ၁၀နှစ်ပြည့််ပြီး ကလေးများ ၁၀ နှစ်ပြည့်မှတ်ပုံတင်ရှိရပါမည်။ ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးပါက ၁၈နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင်ရှိရမည်။
၄) အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင် မရှိသေးပါက မွေးစာရင်းမူရင်း နှင့် ကျောင်းသားကဒ် ပြပေးရပါမည်။ - ခရီးသွားမည့်သူတို့သည် အိမ်ထောင်ဖက်စုံတွဲဖြစ်သော်လည်း သန်းခေါင်းစာရင်းတွင် မပါဝင်သေးပါက - လ.၀.က တွင် ထည့်သွင်းထားရပါမည်။ အကယ်၍ မထည့်ရသေးပါက မိမိတို့၏ လက်ထက် စာချုပ်မူရင်းဖြင့် ပြပေးရပါမည်။ - မိမိဘဏ်စာအုပ် မူရင်းနှင့် Balance Certificate မူရင်း - ဘဏ်စာအုပ်ထဲတွင် အနည်းဆုံး ပိုက်ဆံ သိန်း ၁၀၀နှင့် အထက်ရှိရပါမည်။ ငွေ အသွင်းအထုတ်ရှိပါက ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။ - Current Account ပြပေးပါက ရှေ့ပြီးခဲ့သော ၆ လ အတွက် Bank Statement ပြပေးရမည်။